Alisson Becker oo ka warbixiyay xilliyadii ugu fiicanaa ee xirfadiisa kubadda cagta
(Liverpool) 04 Sebt 2019. Goolhayaha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Alisson Becker ayaa sheegay in soo laabashadii Reds ay ku hor sameysay Barcelona kulankii lugta labaad ee wareega afar dhamaadka Champions League xilli ciyaareedkii hore ay ka mid tahay xilliyada ugu fiican ee mustaqbalkiisa ciyaareed.
Liverpool ayaa ku wajahday Barcelona wareega afar dhamaadka Champions League xilli ciyaareedkii hore, kulanka lugta hore ee ka dhacay garoonka Camp Nou kaasoo ay Barca ku adkaatay 3-0, balse sheekada layaabka leh ayaa waxay ka dhacday garoonka Anfield kulankii lugta labaad kaddib markii ay Reds ku adkaatay 4-0.
Haddaba Alisson Becker ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain wuxuu kaga hadlay waqtiyadiisii ugu fiicnaa ee xili ciyaareedkii hore wuxuuna yiri:
“Waxaa jiray waqtiyo badan oo gaar ah, wayna adag tahay in la doorto, laakiin soo laabashadii aan ku hor sameynay Barcelona ayaa ila fiican aniga ahaan, maadaama ay aheyd ciyaar aad u adag ee ka dhan ah mid ka mid ah kooxaha ugu awooda badan adduunka”.
Intaas kaddib Alisson Becker oo su’aal laga weydiiyay suurtogalnimada uu kaga mid noqon karo xiddigaha u sharaxan sanadkan ku guuleysiga abaa-marinta Ballon d’Or wuxuuna ku jawaabay:
“Waan aqriyaa wararka ku saabsan arintan, waana ku faraxsanahay, waan ka war qabaa inay noqon doonto arrin aad u adag, maadaama aan ka ciyaaro booska goolhaayaha, laakiin kaliya in la sheego inaan ka mid ahay musharaxiinta abaal-marintan, taas ayaa ka dhigeysa inaan shaqadeyda u qabsado sida ugu fiican”.
Daniel Alves oo kaga digay kooxda Barcelona guuldarada heshiiska Neymar Jr bilooyin kahor